हावाले भरिएको बेलुन र घमण्डले भरिएको मान्छे उस्तै हुन्, जसलाई फुटाउन पर्दैन, आफै फुट्छ – अनमोल भनाईहरू अनमोल भनाईहावाले भरिएको बेलुन र घमण्डले भरिएको मान्छे उस्तै हुन्, जसलाई फुटाउन पर्दैन, आफै फुट्छ – अनमोल भनाईहरू अनमोल भनाईहावाले भरिएको बेलुन र घमण्डले भरिएको मान्छे उस्तै हुन्, जसलाई फुटाउन पर्दैन, आफै फुट्छ – अनमोल भनाईहरू अनमोल भनाईहावाले भरिएको बेलुन र घमण्डले भरिएको मान्छे उस्तै हुन्, जसलाई फुटाउन पर्दैन, आफै फुट्छ – अनमोल भनाईहरू अनमोल भनाई – Nayabook
हावाले भरिएको बेलुन र घमण्डले भरिएको मान्छे उस्तै हुन्, जसलाई फुटाउन पर्दैन, आफै फुट्छ – अनमोल भनाईहरू अनमोल भनाईहावाले भरिएको बेलुन र घमण्डले भरिएको मान्छे उस्तै हुन्, जसलाई फुटाउन पर्दैन, आफै फुट्छ – अनमोल भनाईहरू अनमोल भनाईहावाले भरिएको बेलुन र घमण्डले भरिएको मान्छे उस्तै हुन्, जसलाई फुटाउन पर्दैन, आफै फुट्छ – अनमोल भनाईहरू अनमोल भनाईहावाले भरिएको बेलुन र घमण्डले भरिएको मान्छे उस्तै हुन्, जसलाई फुटाउन पर्दैन, आफै फुट्छ – अनमोल भनाईहरू अनमोल भनाई
१) पग्लिरहेको हिउँ जस्तै बन, आफुलाई पखाल्दै जाउ । २) तिमी ठुलो आवाज मार्फत होइन, शब्दहरु मार्फत बोल किनकि फूलहरु फुल्ने पानीको कारणले हो, मेघ गर्जनले होइन ।
३) सफलताको लागि तीन चिज को आवश्यकता पर्छ लगनशिलता, धैर्यता र सकारात्मक सोच ।
४) हावाले भरिएको बेलुन र घमण्डले भरिएको मान्छे उस्तै हुन्, जसलाई फुटाउन पर्दैन, आफै फुट्छ ।
५) असफल मान्छे दुनियाको दरले सोच बदल्ने गर्छन् तर सफल मान्छे आफ्नो सोचले दुनियालाइनै बदल्ने गर्छन् ।
६) जिन्दगीको एक मात्र लक्ष्य जागिर खाने होइन, अरुलाई जागिर खुवाउने बन्नु छ । ७) दिमाग जहिलेपनि कुनैपनि चुनौतीको सामना गर्नाले धेरै बुद्दिमानी हुन्छ ।
८) मेरो दिलमा कतिमाया थियो उनले उन्ले जानेको भए के हुने थियो र, मैले मागेको थिए भगवान संग, उनले पनि माग्देको भए के हुनेथियोर ?
९) मान्छे त त्यो हो जसले अरुको दुखलाई पनि महशुस गर्ने गर्छ किनकि आफ्नो दुख मात्र त जनावरले पनि महशुस गर्छ ।
१०) आशा गरिएका सबैकुरा त कहिले पुग्दैन तर आशा गर्न पनि छोडनु पनि त हुदैन आशा नै जिन्दगीको अर्को नाम हो । ११) असंभव भन्ने शब्द मेरो शब्दकोशमा छैन ।
१२) एउटा मान्छेले जिन्दगीलाई सोधेछ कि किन सबैलाई खुसी दिदैनस ? तब जिन्दगीले भनेछ, म सबैलाई खुशी नै दिने गर्छु तर मान्छेको स्वभाव नै यस्तो छ कि एउटाको खुशी अर्कोको लागि दुख भईदिन्छ ।
१३) बुझ्न नसकिने मान्छेको मन अनि स्वाभाव । १४) कुरा नबुझेर नबोल , बोलाइ अनि बुझाइ फरक भयो भने बोल्नुको कुनै अर्थ रहदैन ।
१५) जीवनमा दुई प्रकारका मान्छेहरु असफल हुन्छन्, एउटा जो सोच्छन् तर गर्दैनन् र अर्को जो गर्नु भन्दा पहिले सोच्दैनन् ।
यो पनि पढ्बानुहोस : बालबालिकालाई यी कुराहरु सिकाउनुहोस् !
साना बालबालिकाप्रतिको अभिभावकको गुनासोः एकै खालको हुने गर्छ— मेरो बच्चाले खाना राम्ररी खाँदैन खुवाइदिनुपर्छ, सागसब्जी मुखैमा हाल्दैन, जंकफुड मात्र खान खोज्छ। मेरो बच्चा समयमा उठ्दैन, उसको बिहानको नित्यकर्ममा नियमितता छैन जसले गर्दा स्कुल पुग्न ढिला हुन्छ।
मेरो बच्चाले आफ्नो ससानो काम पनि आफैं गर्दैन, सबै सामान अस्तव्यस्त हुन्छन् मिलाउँदा-मिलाउँदा हैरान हुन्छु। मेरा छोराछोरीलाई मोबाइलबाहेक केहीको वास्ता हुँदैन, घरमा को आए-के भयो केही थाहा नहुने। खै यी केटाकेटी कहिले व्यावहारिक बन्ने होलान्….आदि ।
यस प्रकारको शिक्षा पाएका बालबालिकामा श्रमप्रति सम्मानको भावना विकास हुन्छ। त्यसैले ठूलो भएपछि उनीहरू आआफ्नो रुचिअनुसार श्रम गर्न सक्षम हुन्छन्। पुस्तकको ज्ञानभन्दा अनुभवको ज्ञान प्रभावकारी हुने हुनाले नै विकसित देशका किशोर-किशोरीहरू निश्चित उमेर पुगेपछि स्वतन्त्र भएर जीवनयापन गर्न सक्षम हुन्छन्।
यसको विपरीत हामीकहाँ प्राथमिक तहदेखि नै धानिनसक्नु किताबको भारी बोकेर विद्यालय जाने अनि तिनै किताब रटेर पढ्ने बालबालिका घर पुगेपछि उनीहरूका जुत्तादेखि लुगाफाटो सबै अरूले नै व्यवस्थित गरिदिनुपर्छ।
शिक्षण-सिकाइलाई प्रभावकारी तथा जीवनोपयोगी बनाउन औपचारिक शिक्षा आरम्भ गर्नुअघि खेल, व्यावहारिक क्रियाकलाप, विभिन्न प्रयोग आदिका माध्यमबाट बालबालिकाको रुचि र क्षमता पत्ता लगाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि मात्र औपचारिक रूपमा पढाइ आरम्भ गरिनुपर्छ।
यसमा पनि विभिन्न समूह बनाएर एकैखाले रुचि र क्षमता हुनेलाई एउटा समूहमा राखेर सोहीअनुरूप पठनपाठन गराउने हो भने शिक्षा प्रभावकारी हुन जान्छ। वर्तमानको हाम्रो शिक्षा पद्धतिले यसतर्फ ध्यान दिएको देखिँदैन। आज हाम्रा बालबालिकालाई भविष्यमा के बन्न चाहन्छौ भनेर प्रश्न गर्दा सबैले एकै खालको र तयारी जवाफ दिने गर्छन्— डाक्टर बन्छु, इन्जिनियर बन्छु, पाइलट बन्छु आदि-आदि।
हाम्रो शिक्षाले बाँझा गरा जोतेर हराभरा बनाउने किसान उत्पादन गर्न चाहँदैन जबकि माटोमा जीवन हुन्छ। माटोलाई माया गरेर यसको संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर हामी आफ्ना बालबालिकालाई सिकाउन सक्दैनौं। आफ्नो काम आफैं गर्नुपर्छ, श्रम गर्दा लाज मान्नु हुँदैन, आत्मनिर्भरता नै सबैभन्दा ठूलो हो भन्ने हाम्रो पाठ्यपुस्तकमा लेखिएन।
त्यसैले त हाम्रो शैक्षिक प्रमाणपत्र बेरोजगारका परिचायक बन्न पुगे। हाम्रा बालबालिकाले कामको इज्जत गर्न सिकेका भए युवा शिक्षित बेरोजगार भएर विदेश पलायन हुने थिएनन् र हामी हरेक कुरामा परनिर्भर पनि बन्ने थिएनौं ! युगौंदेखि अनेकौं विभेद, रुढि र अन्धविश्वासले ग्रसित हाम्रो समाजमा महिलाले गर्ने, पुरुषले गर्ने, उपल्लो जाति-वर्ग, तल्लो जाति-वर्ग, धनी-गरिब आदिले गर्ने फरक-फरक कार्यविभाजन देखिन्छ। त्यसैले यहाँ श्रमले सम्मान पाउन सकेको देखिँदैन। अबको शिक्षा पद्धतिमा परिवर्तन आवश्यक देखिएको छ।